ကျွန်တော် ညံ့ခဲ့ ၊ ပျင်းခဲ့ ၊ ဖျင်းခဲ့ သမျှ ( Henry Aung ) — HiveHustlers
#myanmar #sharing #proofofbrain #archon #neoxian #creativecoin #aeneas #hivelist #hivehustlers
ansoe2months ago
ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်မဝင်စားတာ အဓိကပါပဲ။ ဒါပေသိ စိတ်ဝင်စားလာအောင်လည်း မကြိုးစားခဲ့ဘူးကိုး လို့။ !PIZZA
ကျွန်တော်က သင်ချာ စိတ်ဝင်စားတာဗျ။ !PIZZA
အာ့ဆိုရင်တော့ ဖြတ်ထိုးညဏ် ကောင်းတာပေါ့။ !PIZZA
nyimwa2months ago
ကျနော်ဆို စာမေးပွဲဖြေပီးရင် ရေကြီးပါစေဆုတောင်းတာ။ ဟိုအရင်တနှစ်က မြို့ရေကြီးတာ အဖြေလွာတွေပါသွားလို့ အကုန်အောင်ရောလေ။ 😁😁😁
အဲသလို မျိုးတွေရှိတယ်။ ကိုယ်တွေတော့ ကျောင်းသားပွဲတော်လုပ်တာ အကုန်အောင်တာပဲ။ !PIZZA
nyinyiwin2months ago
ဖြစ်ရမယ် တို့မြန်မာကွန်မြူနတီကြီးက ဘဝတူတွေစုထားသလားအောက်မေ့ရတယ်နော်။ ကျနော်က ပိုဆိုးတယ် ကျက်စာလည်းမရ တွက်စာလည်းမရ ဟီးဟီး 😂😁 !PIZZA
ဟ ကိုဟင်ရ ဆုတောင်း တူချက် ကျုပ်လဲ ဆယ်တန်းဖြေတုန်းက
အဖြေလွှာတွေ မီးလောင်းပါစေ ဆုတောင်းဖူးပ 😁
ong.aye.myat.mon2months ago
သင်္ချာကတော့ ညံ့ပါတယ် ကျက်စာပဲ ရတယ် တွက်စာအားနည်းတယ် !PIZZA
အတူတူပဲ။ စိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ သမိုင်းပဲ။ !PIZZA
nweoomon2months ago
သင်္ချာတော့ ကျနော်လည်းညံ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်းကျ စွတ်ရွတ်ပြီး ဂုဏ်ထူးပါလာတယ်။ ကျူရှင်ဆရာက အသင်အပြကောင်းတာလည်းပါတယ်။
ဂုဏ်ထူးပါတာ တော်လို့ပေါ့။ သင်္ချာ တော်ရင် ဖြတ်ထိုးညာဏ်ကောင်း ပြီ။ !PIZZA
naythan2months ago
စိတ်တွတ် တွတ်တာကတော့ မြန်မာပြည်က ဈေးသည်တွေ အတော်ဆုံး
စိတ်အဝင်စားဆုံး ဘာသာရပ်ကတော့ Mathematics.
ကျက်စာဆို ပျင်းတာ ကြောင့်
တို့ကတော့ ကျက်စာပဲ။ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားဆုံးပဲ။ !PIZZA
Congratulations @kachinhenry! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Thanks You !PIZZA
You're welcome @kachinhenry.
voting done for Proposal - 147 by using hive-singer
Thank you for your unfailing support @kachinhenry, much appreciated!
@kachinhenry, you've been given LUV from @hivebuzz.
ong.aye.myat.mon tipped kachinhenry (x1)
kachinhenry tipped ong.aye.myat.mon (x1)
@kachinhenry(10/20) tipped @hivebuzz (x1)
kachinhenry tipped mamamyanmar (x1)